Mmiri mmiri nke Království - PetrPikora.com
Mmiri mmiri Les Království
Forest Alaeze a ndagwurugwu dam esite na osimiri Elbe, wuru na 1920. Ọ na-emi odude nso hamlet Těšnov na ndutịm ebe nke Bila Tremesna, 4 km upstream si n'obodo Dvur Králové nad Labem, na a warara ndagwurugwu, nke na-aga Kocléřovským azụ. Na ekpe ụlọ akụ ya n'ókè a nnukwu ohia alaeze, na ike nke ochie n'ókè ọhịa, mgbe nke ọ na-nwetara aha ya mmiri e gbochiri egbochi.
Mmiri mmiri dị iche iche dị iche iche na Czech na ọnọdụ ya nke ọma. Taa, n'ihi na ọ dị iche iche, ọ bụ ebe a na-achọ ebe ndị njem nleta.
Site na 18. April 1964 bụ dam na mmiri ọkụ nke edere aha na 1. July 2010 bụ omenala mba.
Mgbe na-agbawa obi idei mmiri nke afọ 1897, nke see ndagwurugwu Elbe ka Pardubice, ọ e kpebiri-ewu abụọ mmiri cannons, nke ga-ejide ifufe mmiri - dams Labe (na Spindleruv Mlyn) na Těšnov (taa dam Forest Alaeze). Documents maka owuwu malitere na 1903 kwadebe oru ngalaba maka ọgwụgwọ nke osimiri na Prague, edu Building Board u. Joseph Plicka. Construction weere ọnọdụ n'etiti 1910-1920 (igbu oge mere site First World War). Construction nke nnyocha ike JV Velflík na ígwè ọnọ site Fanta na Jireš (ma ụlọ ọrụ na-site Prague). Oche-ewu na-akwụ ụgwọ dịrị 4,7 nde Austrian okpueze. Mgbe ẹkụre na-ewu bụ ndị kasị ibu mmiri na-esite n'ebe bụbu Czechoslovakia.
Dyke bụ arc gravitational, bricked site King sandstone. Ogologo ebe mgbochi mmiri dị na isi bụ mita 37 na okpueze 7,2 m. Ogologo ogologo mmiri mbadamba na okpueze bụ 218 mita. Elu kachasị elu nke mmiri mgbochi bụ 41,1 m, omimi dị na mgbochi bụ ihe dịka mita 28. Osimiri ahụ nwere ogologo 5,1 kilomita na ebe kachasịa mmiri rikpuru bụ hectare 85 (na arụmọrụ nkịtị 58,6 ha). Dị ka akụkụ nke mmiri mgbochi ahụ, 1923 nwekwara ọdụ ụgbọ mmiri nke nwere ike nke 2 × 600 kW. Na 2005, a na-edozi turbines, ikike ọhụrụ nke 2120 kW. Mgbe okpueze ahụ, dyke na-eduzi ụzọ dị mkpa nke obodo.
A na-ejikọta ụdị ụlọ niile na ịhụnanya, mmụọ pseudo-gothic. Ọ bụ ọnụ ụzọ ámá abụọ mejupụtara okpueze nke ọdọ mmiri ahụ. Ụlọ ahụ, na-eguzo n'akụkụ aka nri, na-echetara otu obere ụlọ nkume na nnukwu ụlọ elu nke nwere ogige.
A pụrụ ịkpọ tank ahụ n'okpuru aha Ohia nke Alaeze, Tešnovská (Těšnovská) na acha ọcha Třemešná.
acha ọcha TřemešnáDvur Králové nad LabemAlaeze ahụOhia nke AlaezeesitedamTešnovskáọdọ mmiriMmiri mmiri Les Království